फोकलिन बनाम Adderall: मतभेद, समानता, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, औषधि जानकारी समाचार, कल्याण मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कल्याण खेलहरु भारी खेल स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि बनाम मित्र कम्पनी, समाचार घरपालुवा जनावर
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> फोकलिन बनाम एडेलरल: भिन्नता, समानताहरू, र कुन तपाईंको लागि उत्तम छ
फोकलिन बनाम एडेलरल: भिन्नता, समानताहरू, र कुन तपाईंको लागि उत्तम छ
कती मेलाटोनिन तपाइँ सुरक्षित रुपमा लिन सक्नुहुन्छ
फोकलिन (डेक्समेथाइल्फेनिडेट) र एडडेरल (डेक्स्ट्रोम्फेटामाइन / लेभोआम्फेटामिन) एडीएचडी, वा ध्यान घाटा hyperactivity अस्वस्थताको उपचार गर्न प्रयोग गरिने औषधी हो। उत्तेजकका रूपमा, यी औषधिहरूले फोकस सुधार गर्न र एडीएचडी भएकाहरूमा आवेग कम गर्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि उनीहरूले काम गर्ने ठ्याक्क तरीका अज्ञात छ, फोकलिन र एडेलरलले मस्तिष्कमा नोरेपाइनफ्रिन र डोपामिनको प्रभावलाई बढावा दिने विश्वास गरिन्छ। नोरपाइनफ्राइन र डोपामाइनको कम स्तरले एडीएचडीको लक्षणहरूमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।
फोकलिन र Adderall एक समान औषधि वर्ग मा छन्। जे होस्, तिनीहरूसँग सुत्र, प्रयोग, र साइड इफेक्टमा केहि भिन्नताहरू छन्।
फोकलिन र Adderall बीच मुख्य फरक के हो?
फोकलिन (फोकलिन कुपनहरू), जसलाई यसको जेनेरिक नाम डेक्स्मेथाइल्फेनिडेट द्वारा पनि चिनिन्छ, नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित हो। यो मेथेलफेनिडेटको एक isomer, वा नजिकको आफन्त हो, Ritalin, Concerta, मेटाडेट, र Daytrana मा सक्रिय घटक। एक isomer को रूप मा, यो methylphenidate युक्त ड्रग्स भन्दा बढी शक्तिशाली प्रभाव मानिन्छ।
फोकलिन (फोकलिन विवरणहरू) तत्काल रिलीज ट्याब्लेटको रूपमा २. mg मिलीग्राम, mg मिलीग्राम, वा १० मिलीग्राममा उपलब्ध छ। फोकलिन चाँडै प्रशासन पछि अवशोषित हुन्छ र रगतमा १ देखि १. hours घण्टामा अधिकतम सांद्रतामा पुग्छ। यो प्राय: दैनिक दुई पटक गरिन्छ र प्रति खुराक चार घण्टा लामो हुन्छ।
फोकलिन एक्सआर एक विस्तारित रिलीज ट्याब्लेट हो जुन mg मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, १ 15 मिलीग्राम, २० मिलीग्राम, २ mg मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, mg 35 मिलीग्राम, र mg० मिलीग्रामको शक्तिमा आउँछ। फोकलिन एक्सआर दैनिक एक पटक लिन सकिन्छ। यसको लामो-अभिनय प्रभावहरूका कारण, फोकलिन एक्सआरको प्रभावहरू छैन छिटो लुगा लगाऊ जस्तै Focalin बाट।
एडडेराल (एडरेल कुपन) एक ब्रान्ड नाम एडीएचडी औषधि TEVA फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित हो। यसमा डेक्सट्रोमफेटाइन र लेभोएम्फेटामिन चार फरक-फरक एम्फेटामिन नुनहरूको संयोजन हुन्छ।
Adderall (Addreall विवरण) immediate मिलीग्राम, .5..5 मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, १२..5 मिलीग्राम, १ 15 मिलीग्राम, २० मिलीग्राम, र mg० मिलीग्रामको बलको साथ तत्काल रिलीज ट्याब्लेटहरूमा आउँदछ। प्रशासन प्रायः to देखि hours घण्टा सम्म प्रभाव को प्रभाव संग प्रशासन पछि लगभग तीन घण्टा अधिकतम सांद्रता मा पुग्छ।
Adderall XR Adderall को एक विस्तारित रिलिज रूप हो जुन mg मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, १ 15 मिलीग्राम, २० मिलीग्राम, २ mg मिलीग्राम, र mg० मिलीग्रामको शक्तिमा आउँदछ। विस्तारित-रिलिज Adderall दैनिक एक पटक 12 घण्टा सम्म प्रभाव संग dosed छ। Focalin विपरीत, Adderall को खुराक मिर्गौला समस्या भएकाहरूमा समायोजन गर्न आवश्यक पर्दछ। पूरै मिर्गौलामा चोट लाग्दा शरीरमा जम्मा हुन सक्छ र साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्छ।
फोकलिन र Adderall बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग उत्तेजक उत्तेजक
जेनेरिक नाम के हो? Dexmethylphenidate डेक्सट्रोअम्पेटामाइन / लेभोअम्फेटाइन
मानक खुराक के हो? सुरुमा, २. mg मिलीग्राम दैनिक दुई पटक। खानाहरू4घण्टा टाढा राख्नु पर्छ खानाको साथ वा बिना। डोज २. mg मिलीग्रामले mg मिलिग्रामसम्म अधिकतम कूल २० मिलीग्राम / दिन, वा १० मिलीग्राम दुई पटकसम्म बढाउन सकिन्छ। बच्चाहरू to देखि years वर्ष पुरानो: २. mg मिलीग्राम दैनिक। खुराक साप्ताहिक अन्तरालमा २. mg मिलीग्रामले बढाउन सक्छ।
वयस्क र बच्चाहरू years बर्ष र माथिका:5मिग्रि एक पटक वा दुई पटक। खुराक साप्ताहिक अन्तरालमा mg मिलीग्रामले बढाउन सक्छ।
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? दीर्घकालीन उपयोगको आवधिक रूपमा समीक्षा गरिनु पर्दछ। दीर्घकालीन उपयोगको आवधिक रूपमा समीक्षा गरिनु पर्दछ।
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र children बर्ष र माथिका बच्चाहरु वयस्क र children बर्ष र माथिका बच्चाहरु
फोकलिनमा सब भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
फोकलिन मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
शर्तहरु फोकलिन र Adderall द्वारा उपचार
फोकलिन र Adderall एडीएचडी को उपचार गर्न प्रयोग गरिने उत्तेजक औषधि हो। दुबै औषधीहरूले एडीएचडी लक्षणहरूको उपचार गर्दछ जस्तै आवेग, बेचैनी, र संगठन, समय प्रबन्धन, र मल्टिटास्किंगको साथ समस्या।
फोकलिन वयस्क र years बर्ष र सो भन्दा बढि बच्चाहरुमा एडीएचडीको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ जबकि Adderall तीन वर्ष वा सो भन्दा बढि उमेर र बच्चाहरूमा ADHD उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। फोकलिन XR र Adderall XR क्याप्सूल को सामग्री एडीएचडी पीडित बच्चाहरु मा सजिलो प्रशासन को लागी स्याउ मा छर्कन सकिन्छ।
Adderall पनि एफडीए-अनुमोदित छ narcolepsy को उपचार गर्न, एक दीर्घकालीन अवस्था अत्यधिक दिनको निन्द्रा सहित। फोकलिनलाई नार्कोलेप्सीको लागि अनुमोदित गरिएको छैन, यद्यपि एक उत्तेजकको रूपमा यसको यस उद्देश्यका लागि केही अफ-लेबल प्रयोग हुन सक्छ।
सर्त फोकलिन Adderall
एडीएचडी हो हो
Narcolepsy अफ-लेबल हो
के फोकलिन वा एडसेलर अधिक प्रभावकारी छ?
दुबै फोकलिन र एडडेराल प्रभावकारितामा समान छन्। यी औषधीहरूले एडीएचडीको लक्षणहरूको उपचार गर्न केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (CNS) मा समान रूपमा काम गर्दछन्।
एक ल्यान्सेटबाट व्यवस्थित समीक्षा १33 डबल-ब्लाइन्ड, अनियमित क्लिनिकल परीक्षणहरू बाट डाटा पोल्ड गरियो। यो समीक्षाले मेथिलफेनिडेट युक्त ड्रग्स, एम्फाटामाइन्स, र गैर-उत्तेजकहरू, जस्तै ग्वानाफेसिन र क्लोनिडाइनसँग दाँज्यो। परिणामहरूले पत्ता लगाए कि मेथिलफेनिडेट युक्त ड्रग्स बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरूमा बढी प्रभावकारी हुन्छन् जबकि एम्फेटमाइन्स वयस्कहरूमा बढी प्रभावकारी हुन्छन्। एम्फेटमाइन्सहरू, जस्तै Adderall (dextroamphetamine / levoamphetamine) र Vyvanse (lisdexamfetamine) पनि छोटो-अवधि ADHD उपचारको लागि पहिलो-लाइन एजेन्टको रूपमा रुचाइन्छ।
तपाईं वा तपाईंको बच्चाको लागि उत्तम ADHD उपचारको लागि डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्। एक उपचार अर्को भन्दा बढि उमेर को आधारमा प्राथमिकता पाउन सकिन्छ, पहिले कोशिस गरिएको औषधी र समग्र अवस्था।
Adderall मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Adderall मूल्य अलर्ट को लागी साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
कभरेज र लागत तुलना Focalin बनाम Adderall
धेरै मेडिकेयर र बीमा योजनाहरु जेनेरिक फोकलिन कभर। लगभग cash ११० को औसत नगद मूल्यको साथ, फोकलिन बिमा बिना महँगो हुन सक्छ। तपाईं अधिक बचत गर्न फोकलिन एकलकेयर कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। Mg० दिनको १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरूको आपूर्तिको लागि, एकलकेयर छुटले लागतलाई $ than० भन्दा कममा ल्याउन सक्छ जुन तपाईं फार्मेसी प्रयोग गर्नुहुन्छ।
जेनेरिक एडलेरल केहि मेडिकेयर र बीमा योजनाहरु द्वारा कभर हुन सक्छ। बीमा बिना, Adderall retail १2२ को औसत खुद्रा मूल्य लाग्न सक्छ। जहाँसम्म, तपाईंले एडीएचडी उपचारका लागि तिर्नु भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन। एक Adderall छूट कार्ड प्रयोग गर्नाले फार्मेसीमा लगभग $ 28 लाई कम गर्न सक्दछ।
मानक खुराक १० मिलीग्राम दुई पटक दैनिक (tablets० ट्याब्लेटको मात्रा) १० मिलीग्राम एक पटक दैनिक (tablets० ट्याब्लेटको मात्रा)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 0– $ 36 $ 7– $ 78
एकलकेयर लागत + +$ + + २ +
फोकलिन बनाम Adderall को सामान्य साइड इफेक्ट
फोकलिन र एड्ड्युलरको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्ट पेट पेट (पेटको दुखाइ), बढेको मुटुको दर (धडकन), रक्तचाप बढेको, मतली, र सुख्खा मुख हुन्। उत्तेजकहरूले भोक पनि गुम्न सक्छ, जसले वजन घटाउन सक्छ।
फोकलिनले अन्य साइड इफेक्टहरू पनि निम्त्याउन सक्छ जस्तै घाँटी दुखाइ र माइग्रेनहरू। Adderall का अन्य साइड इफेक्टमा एक अप्रिय स्वाद वा स्वाद गडबडी समावेश छ।
गम्भीर साइड इफेक्टमा अत्यधिक संवेदनशीलता प्रतिक्रिया वा औषधि सामग्रीहरूमा एलर्जी प्रतिक्रिया समावेश छ। यदि तपाईंले यी औषधीहरू लिए पछि गम्भीर दाग वा सास फेर्ने समस्या (anaphylaxis) अनुभव गर्नुभयो भने तुरून्त चिकित्सकको खोजी गर्नुहोस्।
पेट दुख्ने हो * हो *
तौल घट्नु हो * हो *
धमकी हो * हो *
रक्तचाप बढ्यो हो * हो *
दुखेको घाँटी हो * हैन -
माइग्रेन हो * हैन -
स्वाद गडबडी हैन - हो *
स्रोत: डेलीमेड ( फोकलिन ), डेलीमेड ( Adderall )
फोकलिन बिरूद्ध Adderall को ड्रग अन्तर्क्रिया
फोकलिन र Adderall समान ड्रग अन्तर्क्रिया छ। मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधकर्ताहरू (MAOIs) फोकलिन र Adderall जस्तै CNS उत्तेजकको प्रभाव बढाउन सक्छ। सीएनएस उत्तेजकहरूसँग एमएओआई लिनु खतरनाक रूपमा उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप संकट), स्ट्रोक, र हृदयघातको परिणाम हुन सक्छ। फोकलिन वा MAOI को साथ Adderall को उपयोग नगर्नुहोस् वा एक MAOI रोक्ने १ 14 दिन भित्र।
फोकलिन र एड्डरल प्रयोग सेरोटोनर्जिक ड्रग्स लिनेहरूमा निगरानी गरिनु पर्छ, जस्तै एन्टीडिप्रेससन्ट, फेन्टानेल, लिथियम, र सेन्ट जोन्स वर्ट। फोकलिनको संयोजन वा सेरोटोनर्जिक ड्रग्सको साथ एड्डेलरलले सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिम बढाउन सक्छ, सम्भावित जीवनलाई जोखिममा पार्ने अवस्था।
उत्तेजकहरूले रक्तचाप बढाउन सक्ने हुनाले रक्तचाप औषधिहरूको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ। यदि तपाई एक उत्तेजक र रक्तचाप औषधी सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने खुराकमा समायोजन आवश्यक पर्न सक्छ।
प्रोटोन पम्प अवरोधकर्ताहरू (पीपीआई) ले फोकलिन वा एडडेरालको शोषण बदल्न सक्दछ। यसले प्रभाव बढाउन वा घटाउन सक्छ।
औषधि ड्रग क्लास फोकलिन Adderall
लोसारटन Antihypertensives हो हो
ओमेप्राजोल प्रोटोन पम्प अवरोधकर्ताहरू (पीपीआई) हो हो
अन्य सम्भावित ड्रगको अन्तर्क्रियाको लागि स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाह लिनुहोस्
फोकलिन र Adderall को चेतावनी
फोकलिन र एडेलरल नियन्त्रित पदार्थ हुन् जुन दुरुपयोगको उच्च सम्भावना हुन्छ। दुबै औषधि वर्गीकृत गरिएको छ तालिका दोस्रो औषधि डीईए द्वारा यी औषधिहरूलाई लामो समयसम्म सेवन गर्दा दुरुपयोग र निर्भरता जोखिम बढ्न सक्छ, विशेष गरी यदि उनीहरूलाई उनीहरूको निर्धारित खुराक भन्दा बाहिर लिइन्छ। यी औषधीहरू स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको मार्गदर्शनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ।
फोकलिन र Adderall सीएनएस उत्तेजकहरू हो जुन हृदय घटनाहरूको बृद्धि जोखिम, जो स्ट्रोक र हार्ट अट्याकसँग जोडिएको हुन सक्छ। उनीहरूको प्रयोगलाई हृदय रोग र हृदय ताल समस्या (एरिथमिया) को इतिहासको साथ अनुगमन गरिनु पर्छ। उत्तेजकले रक्तचाप र मुटुको दर पनि बढाउन सक्छ। रक्तचाप मोनिटर गर्नुहोस् उत्तेजकहरू लिँदा, विशेष गरी यदि तपाईंसँग उच्च रक्तचापको इतिहास छ भने।
उत्तेजकको प्रयोगले अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन वा बिगार्न सक्छ। उत्तेजकहरू लिइरहेको बेला शत्रुता, चिन्ता, आक्रामकता, विकृति, र डिप्रेसनका लक्षणहरूको लागि मोनिटर गर्नुहोस्। Focalin वा Adderall लिनु अघि, यदि तपाइँलाई डिप्रेसन वा द्विध्रुवीय गडबडको इतिहास छ भने आफ्नो डाक्टरलाई भन्नुहोस्।
फोकलिन बनाम Adderall को बारे मा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
फोकलिन भनेको के हो?
फोकलिन एक ADHD औषधि हो। यो जेनेरिक औषधिको रूपमा उपलब्ध छ जुन डेक्समेथाइल्फेनिडेट भनिन्छ। फोकलिन सीएनएस उत्तेजक भनिने औषधिहरूको वर्गको एक हिस्सा हो। तत्काल रिलीज फोकलिन ट्याब्लेटहरू सामान्यतया प्रभावमा दैनिक दुई पटक लिन्छन् जुन खुराकको बीचमा चार घण्टासम्म रहन्छ। फोकलिन विस्तारित रिलिज ट्याब्लेटमा पनि उपलब्ध छ।
Adderall के हो?
Adderall एक ब्रान्ड नाम ADHD औषधि हो, जेनेरिक औषधिको रूपमा पनि उपलब्ध छ, एम्फीटामाइन साल्टको संयोजन समावेश। यो एडीएचडीका साथ मानिसमा फोकस सुधार गर्न र आवेग व्यवस्थापन गर्न उत्तेजक औषधिको रूपमा काम गर्दछ। Adderall तत्काल रिलीज र विस्तारित रिलीज फारमहरु मा आउँछ। तत्काल रिलीज Adderall ट्याब्लेटहरू ADHD को लागि प्राय: प्रत्येक चार देखि छ घण्टा लिन्छन्।
के फोकलिन र Adderall उस्तै हो?
दुबै फोकलिन र एडलेरल मस्तिष्कमा नोरपाइनफ्रिन र डोपामाइनको पुनःअपटेक रोक्दै समान तरिकाले कार्य गर्दछ। यद्यपि, फोकलिनमा डेक्समेथाइल्फेनिडेट हुन्छ र एड्डरलमा एम्फेटामिन नुन हुन्छ। तिनीहरूसँग उपलब्ध शक्ति र साइड इफेक्टहरूमा केहि भिन्नताहरू छन्।
के फोकलिन वा एडेलरल राम्रो छ?
दुबै फोकलिन र एडेलराल एडीएचडीको लागि प्रभावकारी उपचार विकल्पहरू हुन्। अध्ययन सुझाव फोकलिन बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरूको उपचारको लागि उत्तम छ भने एड्लेरल एडीएचडीका साथ वयस्कहरूको उपचारको लागि उत्तम छ। दुबै ड्रग्स तत्काल रिलीज र विस्तारित रिलीज संस्करणहरूमा उपलब्ध छन्। तपाईंको लागि उत्तम उपचार विकल्पको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
के म फोकलिन वा एड्डेलरल गर्भवती हुँदा प्रयोग गर्न सक्छु?
गर्भवती भएको बेलामा फोकलिन वा एडडेरालको प्रयोगका साथ जन्म दोषहरूको जोखिम हुन सक्छ। उत्तेजकहरू मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि लाभहरू सम्भावित जोखिमहरू भन्दा बढी हुन्छन्। गर्भावस्थामा उत्तेजक लिनेहरू प्रतिकूल प्रभावको जोखिमको बारेमा पर्याप्त जानकारी छैन। Focalin वा Adderall प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
के म फोकलिन प्रयोग गर्न सक्छु वा रक्सीको साथ Adderall?
सामान्यतया फोकलिन वा एडडेराल लिँदा रक्सी पिउन सिफारिस गर्दैन। एक उत्तेजकमा हुँदा रक्सीको सेवनले साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्छ, विशेष गरी मुटुमा। रक्सी र उत्तेजकको संयोजनले दुरुपयोग, निर्भरता, र अधिक मात्राको जोखिमलाई पनि बढाउन सक्छ।
फोकलिन एडडेरलको तुलनामा कत्तिको बलियो छ?
एडीएचडीको उपचारको लागि प्रभावकारितामा फोकलिन र एडडेरल तुलनात्मक हुन्छन्। एक उत्तेजक को क्षमता निर्धारित खुराक, अन्य ड्रग्स तपाईले लिनु हुने, र तपाइँको समग्र स्थिति मा निर्भर गर्दछ।
Adderall को बराबर के हो?
एडेरालल एक उत्तेजक औषधि हो जसले एम्फीटामिन लवणको संयोजन समावेश गर्दछ। अन्य छोटो अभिनय उत्तेजक दवाबहरु जो एडीएचडी को उपचार को लागी शामिल छ:
के फोकलिनले तपाईंलाई जागा रहन्छ? / फोकलिन एक उत्तेजक हो?
फोकलिन एक सीएनएस उत्तेजक हो। फोकलिनलाई ADHD भएका व्यक्तिहरूमा फोकस र सतर्कता सुधार गर्न मद्दत गर्न सिफारिस गर्न सकिन्छ। यसको उत्तेजक प्रभावहरूको कारण, यसले जागृतिलाई बढावा दिन सक्छ। यद्यपि यो एफडीएलाई निद्रा विकारहरू, जस्तो कि नारकोलेप्सीको उपचार गर्न अनुमोदित गरिएको छैन।
कन्सर्टा बनाम Adderall: भिन्नता, समानता, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
कसरी गर्भावस्था को समयमा तपाईंको दमा प्रबन्ध गर्ने
के तपाइँ योजना बी गोली लिई सके पछि सेक्स गर्न सक्नुहुन्छ?
कसरी चाँडै रक्तचाप तल ल्याउन
के मतली र उल्टी को लागी राम्रो छ
सबैभन्दा बलियो मांसपेशी relaxer के तपाइँ पाउन सक्नुहुन्छ
के मैले भिटामिन डी वा भिटामिन डी ३ लिनु पर्छ?
एक हप्ता शल्यक्रिया पछि मल त्याग छैन